နယ်စပ်ကနေ တရုတ်ဘေးကို ထွက်ပြေးတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ၁ သောင်းခွဲထိ ရှိလာပြီလို့ UNOCHA ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း နယ်စပ်ကနေ တရုတ်ဘေးကို ထွက်ပြေးတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ၁ သောင်းခွဲထိ ရှိလာပြီလို့ UNOCHA ပြော
(FILES) In this file photograph taken October 14, 2016, armed rebels belonging to the Kachin Independence Army (KIA) ethnic group move towards the frontline near Laiza in Kachin state. At least 11 people have died this month December 2016 in northern Myanmar in escalating clashes between security forces and armed insurgents that have undercut Aung San Suu Kyi's bid for peace. Thousands have fled their homes in northern Shan state since the fighting erupted in late November, with many crossing the border into China. / AFP PHOTO / HKUN LAT
နယ်စပ်ကနေ တရုတ်ဘေးကို ထွက်ပြေးတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ၁ သောင်းခွဲထိ ရှိလာပြီလို့ UNOCHA ပြော
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့အတွင်း နယ်စပ်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံထဲကို ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးခဲ့သူ ၁ သောင်းခွဲလောက်အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူသာချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး (UNOCHA)ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပီယာရီပီရွန်က ရှမ်းပြည်နယ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ကတည်းက ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ ဒုက္ခသည် ၂၄၀၀ ထပ်တိုးလာတာကြောင့် စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ဒုက္ခသည် ၁၅၀၀၀ ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ ပီယာရီပီရွန်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွန်းယင်ကတော့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကို အသေးစိတ်မသိသေးကြောင်းနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ပဲ အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
Previous articleတူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကို တူရကီ ရဲအရာရှိ ပစ်သတ်
Next articleတရားမျှတရေး အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ လူငယ်ရှေ့နေတွေကို နေရာပေးသွားမယ် (ရုပ်/သံ)